Sambava-SAVA: “Voakilasy ho mampiasa ankizy tsy ampy taona” hoy ny PM Ntsay Christian
mardi, 12 juin 2018 15:04
Nofaritan’ny praiminisitra Ntsay Christian manokana androany ny hoe: inona moa izany ankizy tsy ampy taona ampiasaina eo amin’ny seha-pihariana lavanila izany ? Aoka tsy hodian-tsy fantatra fa misy fifandraisana ny fanajana ny zo eo amin’ny lafiny toe-karena io hoy izy.
Ny firenena manafatra lavanila aty Madagasikara dia tsy hanaiky intsony raha toa ka mbola mahita izany fampiasana ankizy tsy ampy taona eo amin’ity seha-pihariana ity, ka mety hisy fiantraikany amin’ny fifandraisana amin’ireo mpiara-mihombon’antoka amintsika amin’ny lafiny vola izany, hoy hatrany ny praiminisitra Ntsay Christian.
Koa inona no ataontsika miaraka mba hanatsarana ity seha-pihariana lavanila ity fa misy adidy ary andraikitsika rehetra manomboka avy amin’ny Governemanta, na ny olom-boafidy na ny mpandraharaha ara-toekarena, eny hatramin'ny fiangonana mba hijery ny lalana mba hahafantsika mitondra ny anjara birikintsika ho an’ny taranaka Malagasy. Aoka tsy ho fombafomba ihany no hankalazana ity Andro iraisam-pirenena momba ny ady ho amin’ny fampiasana ny ankizy tsy ampy taona ity, hoy izy.
Ireo no namintinana ny resaka nataon’ny Praiministra Ntsay Christian tao amin’ny Resto Capricorne Sambava androany tao anatiny fanokafana ity hetsika ity, izay marihina isaky ny 12 Jona ity.